Iwo Akakosha Metriki eEnewtiki yeInbound Kushambadzira | Martech Zone
Kunyangwe makambani makurusa anorwira nekutevera metric. Kwemakore anopfuura gumi ndataura izvozvo analytics inowanzo gadzira mibvunzo yakawanda kupfuura yainoita mhinduro sevashandisi, sefa, uye kuongorora traffic. Sanganisa icho pamwe nenyaya yekuti inopfuura hafu yezvako zvese analytics traffic inogona kugadzirwa nemabhoti, uye wakasara uchikwenya musoro wako nguva zhinji.
Mojo Media Labs yakaburitsa iyi infographic, Inbound Marketer's Gwaro reData & Analytics. Inopa matanho ekuomarara pamwe nehungwaru pane yega yega metric yekushambadzira inbound uye kuti kangani kuongorora imwe metric.
mazuva ose - inosanganisira kushanya, zvinotungamira, vatengi, mushanyi kutungamira mwero wekushandurwa, gore pamusoro pegore kufambira mberi, zvinotungamira kumatengo ekushandurwa kwevatengi, uye mabhenji ezvinhu zveumwe neumwe.
2 kusvika katatu nguva pasvondo - tarisa matsime emigwagwa, kushanyirwa nekwavhurwa nekwenzira, kutungamira uye kutendeuka mwero nekutumira sosi uyezve gore pamusoro pegore shanduko uye enzaniso yekuenzanisa.
2 kusvika katatu nguva pamwedzi - ongorora granular dhata mukati mega yega sosi sosi, kupihwa uye hunhu, uye gore pamusoro pegore kufambira mberi nekuenzanisa mabhenji.
1 kusvika katatu nguva pamwedzi - ongorora mazwi akakosha, mapeji ekumhara, email metric, kufona-ku-kuita mashandiro, vateveri vezvemagariro, kufarira munharaunda uye zvikamu, blog analytics, uye zvinowanda zvinongedzo, uye nekutsvaga kwekuita.
Zano rimwe chete rinogona kukubatsira kushandira kumashure. Makambani anowanzo vhura analytics uye tanga naani ari kushanyira peji rekumba. Pane kudaro, vhura analytics uye uone shanduko dzako, ipapo shanduko yako yekushandura, uye shanda nzira yako kudzoka kumapeji uye kuendesa. Izvi zvinokubatsira iwe kuti utarise pamatanho akakosha ari kutyaira bhizinesi pane kuvhiringidzika pane metric izvo zvingave zvisina basa.
Tags: Analyticsanalytics mabhenjibasablog analyticskufona-kune-chiito kuitamwero wekushandurwacta kuitavatengicyear pamusoro pegore kufambira mberiemail metricsinbound linksmetrics akakoshamazwi akadzamakumhara pejitungamira-kumutengizvinoisametricsmagariro anoteverasocial likessocial sharingtraffic zvinyorwahunhu hwevashanyimushanyi-kutungamiraVisitskushanyirwa nekwaita traffic